Sarayaku: Sarin’ny Faharetana Sy Ny Safidy Hafa · Global Voices teny Malagasy
Sarayaku: Sarin'ny Faharetana Sy Ny Safidy Hafa
Nandika (en) i El Churo
Voadika ny 01 Novambra 2014 18:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Aymara, Español
Vaovao momba ny Tetikasa Nahazo Vatsy Avy Amin'ny Rising Voices
Fiarahamonina Sarayaku. Sary avy amin'ny tetikasa.
Mampahatsiary sary maro ankoatra ny dikany amin'ny fiteny Kichwa (sara = katsaka, yaku = rano) ny voambolana [Sarayaku]. Ny sary voalohany dia ilay fiarahamonina mijoro manohitra ireo orinasa mpitrandraka solitany tsy hiditra ao amin'ny sisintaniny mandritra ny 15 taona mahery. Eo ihany koa ny sarin'olona nizotra nankany amin'ny Fitsarana misahana ny zon'olombelona eo amin'ny samy Amerikana, mitaky ny hanajana ny zon'izy ireo, ary namela tantara amin'ny olona indizeny manerantany mba hanajana azy ireo ho fakan-kevitra voalohany, ary hanajana ihany koa ny fiainan'izy ireo sy ny sisintaniny. Ny sary fahatelo dia avy amin'ny tantara an-tsehatra iray manontolo sy avy amin'ilay mpanatontosa sarimihetsika indizeny Eriberto Gualinga, miresaka tantara mahasondriana amin'ny alalan'ny sary maro.
Ary hanatontosa ny sary fahaefatra amin'ny alalan'ity tetikasa ity izahay: tanora Sarayaku, miaraka amin'ireo tanora indizeny hafa avy ao Amazonia Atsimo ao Ekoatera hilaza ny tantara an-dahatsary nomerika avy amin'izy ireo miresaka ny fijoroana sy ny tolo-kevitra hafa fiandry avy amin'izy ireo antsoina hoe Sumak Allpa (Ala Velona) ho fiarovana ny sisintanin'izy ireo amin'ny XI Oil Round, izay mitady fankatoavana hitrandrahana solitany ao amin'ny faritra midadasiky ny zaratany nolovaina tamin'ny razamben'ireo vondrom-pirenena vazimba teratany (indizeny) fito miorina ao Amazonia Atsimo ao Ekoatera. Hizara ny sarin'izy ireo amin'ny alalan'ny fitaovana antserasera azo maimaim-poana ny tanora ary ho maro ny mason'izao tontolo izao hitodika amin'izany sary iray izany.
Mba hanatontosana izany, handray lakana izahay, ary raha miakatra ny renirano, dia haharitra efatra ora ny dianay, raha ambany ny renirano, dia mety haharitra 11 ora. Tsy misy lalambe migodàna mankany Sarayaku, ny safidy tokana dia mandeha amin'ny fiaramanidina kely na amin'ny lakana.
Ao amin'ny fiarahamonina Sarayaku, tsy manaiky ampidirana simenitra sy vifotsy ry zareo, na dia hoentin'ny governemanta sy ny fampandrosoana maimaim-poana aza izany. Eriberto, José, Tayta Sabino, Doña Corina, Ebelio, Nina, sy maro hafa no miandry antsika hizara chicha (zava-pisotro avy amin'ny katsaka) ary raha betsaka ny vokatry ny jono amin'izany andro izany, dia hoavy koa ny sakafo miaraka amin'ny trondro, mangahazo ary legioma.
Tahaka ny hoe ny ampitso dia mety hisy olona avy any an-tanàna lavitra na avy any amin'ny firenena lavitra na avy any amin'ny kaontinanta hafa koa aza nahita fa hisy atrikasa ao Sarayaku. Mitranga izany satria namoaka ny sarin'ny atrikasa ao amin'ny media sosialy i Traya, Ebelio ary ny tanora hafa. Tsy misy arabe ao Sarayaku, fiarahamonina ao afovoan'i Amazonian'i Ekoatera satria toherin'ny fiarahamonina ny fanamboarana izany satria fantatr'izy ireo fa tsy tongatonga ho azy amin'izao izany arabe izany. Tonga miaraka amin'ny orinasa ny arabe ary miara-dalana amin'izany ny fizarazarana ny sisintany sy ny fiarahamoniny.
Koa nilaza ny Sarayaku fa tsy mila arabe, saingy manaiky ny isian'ny aterineto. Mampiasa aterineto ireo lehiben'ny fifandraisana hanapahana hevitra, handresem-pironana ary mba ho eo akaiky eo rehefa mampiasa azy amin'ny fianarany sy, mazava ho azy, rehefa mijery media sosialy, mamoaka sary, mijery lahatsary, tahaka ireo tanora hafa manerantany ny ankizy sy ny tanora ao aminy.
Ireo lahatsary hotontosainay miaraka araka ny fomba fiasan'ny ao amin'ny fiarahamonin'ny mpanatontosa sarimihetsika dia hozaraina ao amin'ny aterineto ao amin'ny habaky ny Sarayaku sy ao amin'ny kaonty tambajotram-pifandraisan'ireo tanora mandray anjara. Atao ireo hanamafisana ny feo sy ny sarin'ny olona manolotra fomba fiainana hafa, sy fomba fampandrosoana hafa.
Araho ny fizotry ny tetikasa ao amin'ny habaky ny Sarayaku, ao amin'ny bilaogin'i El Churo, ary ao amin'ny Twitter (@elchuro) sy (@Sarayaku_Libre).
Dikanteny amin'ny Espaniola avy amin'i Eddie Avila.